10.000 Ar sandoka saika hatakalo 5.000 Ar tena izy… : tratran’ny polisy ambodiomby ireo mpanao vola sandoka | NewsMada
10.000 Ar sandoka saika hatakalo 5.000 Ar tena izy… : tratran’ny polisy ambodiomby ireo mpanao vola sandoka
Teo am-panakalozana ireo vola sandoka (vola vaovao), 10.000 Ar miisa 35, teny Ampitatafika indrindra ireto olona telo no tratran’ny polisy ambodiomby saika hanaparitaka izany. Natolotra ny fampanoavana, ary naiditra am-ponja vonjimaika, omaly, ireto olon-dratsy ireto.
Ny polisy avy ao amin’ny direction de la repression des infractions economique, financière et de la sécurisation des investissements (DRIEFSI) fantatry ny maro amin’ny hoe polisy ekonomika no nahasambotra ireto olona ireto teny Ampitatafika, ny talata 5 septambra 2017 ireo olona telo nitondra vola sandoka ireo.
Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha miady amin’ny hosoka ao amin’ny polisy ekonomika, ny kaomisera Ramampiandry Nicolas, fehezam-bola sandoka amin’ilay vola vaovao 10 000 Ar miisa 35 mitentina 3 500 000 Ar ny tratra tany amin’ireto olona telo voarohirohy ireto. Teo am-pikasana ny hanakalo ireo vola sandoka ireo amin’ny vola tena izy 5 000 Ar izy ireo no tra-tehaky ny polisy. Teo am-pitadiavana olona teny amin’iny faritra Ampitatafika iny ry zalahy no tratran’ny vela-pandriky ny polisy.
Niainga avy amin’ny fanomezam-baovao no nahafahan’ny polisy nidina teny an-toerana ka nisambotra ireto olona ireto avy hatrany. Mbola tratra nandritra ny fisavan’ny polisy ireo vola sandoka amana hetsiny ireo.
Mahita hirika hatrany ny mpanao vola sandoka…
Araka ny fanazavan’ny kaomisera Ramampiandry Nicolas, tsy hita tamin’ireto vola sandoka tratra ireto ny mari-pamantarana rehetra mampiavaka izany amin’ny vola vaovao tena izy. Nohamafisiny hatrany anefa fa raha ny fitandroana ny vola vaovao navoakan’ny fanjakana amin’izao fotoana izao dia ireny iaraha-mahita ireny ny famoahan’ny banky foibe izany eny amin’ny haino aman-jery. Manentana hatrany ny eo anivon’ny polisim-pirenena amin’ny fanomezam-baovao raha vao misy tranga hafahafa miseho eny amin’ny fiarahamonina. Nangataka fiaraha-miasa amin’ny olon-tsotra ihany koa ity manamboninahitra ambony eo anivon’ny polisim-pirenena ity mba tsy hisalasala amin’ny fanomezam-baovao rehefa mahita trangan-javatra toy izao.
Nanizingizina anefa ny fanjakana tamin’ny fotoana namoahana ireo vola vaovao fa tsy azo anaovana hosoka izany. Tsy kely lalana anefa ny ratsy fa mahita hirika hatrany.
Une réponse à "10.000 Ar sandoka saika hatakalo 5.000 Ar tena izy… : tratran’ny polisy ambodiomby ireo mpanao vola sandoka"
XAVIER 08/09/2017 à 17:04
Je ne comprend pas le malgache, pourriez vous faire un effort pour traduire en Français vos articles au demeurant fort intéressants. La finalité je crois c’est de faire connaître votre pays et votre journal à l’international, alors un petit geste pour le lecteur surtout le francophone.